1 months ago3တစ်နှစ် #1260 by Alexander29
မင်္ဂလာပါ တစ်နေ့နေ့မှာသင်ယောက်ျားတွေဟာ Airbus အထုပ်မှ sharklets add မယ်ဆိုရင်ငါအံ့သြခဲ့သလဲ ကြောင်းကိုချစ်မလား! လေးစားစွာဖြင့်!
1 months ago3တစ်နှစ် #1279 by brikir
ငါဒုတိယဤတောင်းဆိုမှုကိုလိုရှိ၏။ ငါသည်လည်းလွန်း sharklets အတူ a321 မဲပေးလိမ့်မယ်။
0.159 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်